Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia any Haiti » Filohan'i Haiti: tsy nahomby ny fanandramana fanonganam-panjakana sy famonoana olona
Filoha Haitiana, Jovenel Moise
"Ny tanjon'ireto olona ireto dia ny hanao andrana amin'ny fiainako," hoy i Jovenel Moise
Olona 23 voasambotra tany Haiti noho ny 'fanandramana fanonganam-panjakana'
Ny filoha Jovenel Moise dia nilaza fa tsy nahomby ny 'fikasana hamono olona'
Mpitsara ny fitsarana tampony Haiti ary inspektera jeneraly ny polisy no isan'ireo voasambotra.
Ny filoham-pirenena Haitiana, Jovenel Moise, dia nanambara fa ny 'fikasana hanongam-panjakana sy hamonoana' dia nopotehin'ny mpampihatra lalàna firenena.
Olona 23 no nosamborin'ny manampahefana ao amin'ny firenena, ao anatin'izany ny mpitsara ao amin'ny Fitsarana Tampony sy ny polisy ambony iray taorian'ilay antsoin'ny filoham-pirenena, Jovenel Moise, hoe 'tetika' hanaovana 'andrana ny ainy'.
"Ny tanjon'ireto olona ireto dia ny hanandrana ny fiainako," hoy i Moise tamin'ny mpanao gazety tamin'ny Alahady, ary nilaza fa "nofoanana" ny teti-dratsy. Nilaza ihany koa ny filoham-pirenena fa efa niasa ny drafitra nanomboka ny faran'ny volana novambra farafaharatsiny, ary nanampy mpitsara ny fitsarana tampony sy inspektera jeneraly ny polisy dia isan'ireo voasambotra.
Ny minisitry ny fitsarana ao amin'ny firenena, Rockefeller Vincent, dia namaritra ilay heverina ho tetika ho “andrana fanonganam-panjakana”. Nanamafy ny manampahefana Haitiana fa farafaharatsiny olona 23 no voasambotra.
Misafotofoto ny fanjakana Karaiba ankehitriny noho ny tsy fitovizan'ny Moise sy ny mpanohitra izay mitaky ny fialany. Reynold Georges, mpisolovava iray izay niasa ho an'ny filoham-pirenena indray mandeha ary avy eo niditra ho mpanohitra, dia nanondro ilay mpitsara voasambotra ho Irvikel Dabresil - lehilahy iray izay voalaza ihany koa fa nankasitraka ny fanohanan'ireo mpanohitra ny filoha.
Nomelohin'ny mpanohitra ny fisamborana ary niantso ny famotsorana tsy misy hatak'andro ireo olona nogadraina, ary namporisika ny Haitianina hanao izany “Mitsangàna” manohitra ny filoha. Nambaran'izy ireo fa tokony nifarana tamin'ity alahady ity ny fe-potoam-piasan'i Moise raha ny filoham-pirenena mihitsy no manizingizina fa manan-jo hijanona eo amin'ny toerany hatramin'ny febroary 2022.
Ny fifandirana dia niainga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nisavoritaka tamin'ny taona 2015. Tamin'izany fotoana izany dia nambara fa mpandresy i Moise tamin'ny voalohany saingy nofoanana ny valim-pifidianana taorian'ny fiampangana hosoka. Na izany aza, voafidy tamim-pahombiazana i Moise tamin'ny taona ho avy ary nianiana tamin'ny asany tamin'ny volana febroary 2017. Noho ny savorovoro tamin'ny fifidianana, dia notarihin'ny filoha vonjimaika iray firenena ny firenena.
Moise koa dia namoaka didy tamin'ny volana janoary 2020 rehefa tapitra ny fe-potoam-piasan'ny parlemantera farany fa tsy nisy ny fifidianana ankapobeny. Ankehitriny, i Haiti dia antenaina hanao fifidianana parlemantera amin'ny volana septambra - volana aorian'ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny lalàm-panorenana natao ny volana aprily izay antenaina hanome fahefana bebe kokoa ny filoha.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nanatri-maso hetsi-panoherana goavambe koa ny firenena noho ny resaka kolikoly sy ny asan-jiolahy marobe. Na izany aza, i Moise dia mankafy ny fanohanan'ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden. Vao tsy ela akory izay, ny mpitondra tenin'ny Departemantam-panjakana amerikana, Ned Price, dia nilaza fa “ny filoha voafidy vaovao dia tokony handimby ny filoha Moise rehefa tapitra ny fe-potoam-piasana ny 7 feb 2022”, ka naka ny toeran'ny Moise tamin'ny fifandirana tamin'ny mpanohitra.
Na eo aza izany dia nanentana an'i Haiti ihany koa izy mba hikarakara araka ny tokony ho izy ny fifidianana amin'ny volana septambra mba hamelan'ny parlemanta hanohy ny asany.
ARC: mbola nihena ny varotra tapakilan'i Etazonia